NCS Sheffield - Fampahalalana momba ny fiarahan'ny Fikambanana Society
NCS Sheffield - Fikambanana Ifanampiana
Miaraha amin'i NCS Sheffield eo am-pelatanan'ny Element Society amin'izao fotoana izao!
Aza hadino ny fahafahanao mifandray amin'ny NCS.
Amin'ny fahavaratra iray mahavariana dia hiala amin'ny trano ianao, hampivelatra fahaiza-manao hanatsarana ny CV anao ary hahita olona mahagaga izay tsy hohadinoinao mihitsy. Inona àry no andrasanao? Ny fiovana dia manomboka amin'ny YES!
PHASE 1: MISAOTRA
Voalohany, handany andro lavitry ny fialam-boly mahafinaritra ny mpampianatra ianao.
Hifandray amin'ny mpiara-mianatra aminao ianao ao anatin'ireo traikefa an-dàlam-panafihana ao amin'ny ivon-toeram-piompiana ivelan'ny toeram-pivarotana izay miady amin'ny hetsika toy ny fiantsonan'ny fiakarana, ny fitsangatsanganana, ny lakana, ary ny archery.
PHASE 2: MIVAVAHA
Ho akaiky kokoa ny tokantranonao, handany fotoana hianarana momba ny faritra misy anao ny vondrona misy anao.
Hahita olona avy amin'ny orinasa sy orinasa eo an-toerana ianao izay hanampy anao sy ireo mpiara-miasa ao amin'ny NCS hampivoatra fahaiza-manao vaovao.
PHASE 3: Ataovy ny marikao
Hiasa ao amin'ny vondrona misy anao ianao mba handrafetana sy hanombohana ny famatsiam-bola ho an'ny tetikasam-pandraharahana manokana ataonao eo amin'ny fiarahamonina izay afaka manova tanteraka ny toerana misy anao.
Hanao ny marika eo amin'ny faritra misy anao ianao, ary hametraka ny tetikasam-piarahamoninao miaraka amin'ny ekipanao.
AND CELEBRATE ...
Farany, rehefa vita ny tetikasam-piarahamoninao, dia fotoana hankalazàna amin'ny grady party.
Hahazo taratasy fanamarinana nosoniavin'ny Praiminisitra ianao ary hahazo ny fahafahana manokana hanatontosana ny asa an-tsitrapo ary hijanona ho mifandray amin'ny faritra misy anao sy ny NCS.
Miova ny andro iainanao androany
NCS fotsiny ny herinandro 4 faramparany, miaraka amin'ny fatorana eo anelanelany, noho izany dia betsaka ny fotoana hanaovana fety mozika sy ny fialantsasatry ny fianakaviana. Ny traikefa NCS manontolo dia nitaky £ 50, anisan'izany ny sakafo, ny asa aman-draharaha ary ny trano fandraisam-bahiny, miaraka amin'ny fanampiana ara-bola ihany koa. Ataovy NCS ny ampahany amin'ny fahavaratrao!
* Ity programa nataon'i The Society Society ity dia handoa anao mihoatra ny £ 50, miaraka amin'ny fanohanana ara-bola raha ilaina *
Ny Fikambanana Elector dia manolotra fandaharana NCS mandritry ny taona. Ny fandaharam-pampianarana dia mety miova arakaraky ny anjara andraikitrao, ary amin'ny firesahana amin'ny herintaona ifehezanao, dia tadidio tsara ny mijery ny programa nofinidinao.
Raha mila fanazavana misimisy kokoa, antsoy anay amin'ny 0114 2999 210, na alefaso mailaka ny ekipanay NCS ncs@elementsociety.co.uk
*** Ataovy azo antoka fa mifidy Elefante ho an'ny mpamatsy anao ianao mba hahazoana ny £ 15 discount online!! ***